vy fanerena vy matevina ho an'ny tsiranoka
Ny valan-tsoavaly stainless vy dia fiara fitehirizam-bokatra ho an'ny singa mando anao toy ny takelaka ambany, menaka, sns.
namboarina tamin'ny AISI304 na 316 izy ireo ary mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny fitaovana fanerena eropeana 97/23 / EC.
Samy hafa ny habeny arak'izay ilaina amin'ny famokarana miaraka amin'ny diametatra 140 mm ka 400 mm. Ny fanerena fanerena mahazatra; 4L, 12L, 20L, 45L, 60L. Ho fanampin'izany dia misy safidy foana ho an'ny filanao manokana.
Safidy maro no misy, miankina amin'ny fizotranao sy ny toetranao amin'ny vokatra. Ohatra iray amin'ireo safidy ireo: ny detection level raha tsy mifandray amin'ny vokatra, mixer na recirculation mba hitazomana ireo ampahany ao amin'ny fampiatoana, banga, famenoana ho azy ny vokatra, fanafanana sns.
Misy safidy ATEX misy ihany koa.
Ny valan-tsindry dia manamarina fa ny vokatra dia voaaro tsara amin'ny famokarana.